Sei vachiyeuchidzwa kwemazuva 9 ne40?
Kuyeukwa kwevakafa ndiyo tsika yakareba, iyo yakatanga munguva yekumuka kwechiKristu. Maererano nechitendero, mweya wemunhu mumwe nomumwe hauna kufa, iye anonyanya kuda minyengetero mushure mekufa. Basa reumwe muKristu mupenyu ndeyekunyengetera kuna Mwari nokuda kwekuzorora kwemweya wemudiwa wakafa. Chimwe chezvinhu zvinokosha zvikuru zvechitendero ndeye sangano rekumuka nekubatanidzwa kwevose vanoziva vakafa kune vachiri vapenyu.
Sei vachiyeukwa pazuva 9?
Bhaibheri rinotaura kuti mweya wemunhu haugoni kufa. Izvi zvinotsigirwa nemuitiro wekuyeuka kweavo vasati vasi kuzere munyika ino. MuChechi Tradition inotaurirwa kuti mushure mekufa mweya wemunhu kwemazuva matatu uri munzvimbo idzodzo dzaidiwa kwaari kunyange munguva yehupenyu. Mushure meizvozvo, mweya unooneka pamberi peMusiki. Mwari anomuratidza zvose zvakanaka zveparadhiso, umo mune mweya yevanhu vanotungamirira mararamiro akarurama. Zvechokwadi mazuva masere mweya inogara mumhepo iyi, inofadza uye inofadza nezvose zvipenzi zveparadhiso. Pazuva rechitanhatu mudzimu unozviratidzazve rwechipiri pamberi paShe. Kudya kweChirangaridzo kunoitwa muchiyeuchidzo chechiitiko ichi nehama neshamwari. Paminamato yezuva rino inorayirwa muChechi.
Nei vanotaurwa pamusoro pezuva makumi mana?
Mazuva makumi mana kubva pazuva rekufa inonzi inonyanya kukosha kune mushure mekufa. Kubvira pazuva rechitanhatu kusvika kune rechi39, mweya unoratidzwa hero umo vatadzi vanotambudzwa. Kunyanya pamusi wemakumi mana zuva mweya unoonekwazve pamberi peHigh Higdom nokuda kweuta. Munguva iyi, dare rinotanga, pakuguma kwaro richazozivikanwa kuti mweya unoenda-kugehena kana paradhiso . Nokudaro, zvinokosha zvikuru munguva ino inokosha uye inokosha yekukumbira Mwari kuti ave nemafadzo maererano nevakafa.
Sei vanhu veOrthodox vachiyeuka mwedzi mitanhatu mushure mekufa?
Kazhinji, kudya kwemafuro kwemwedzi mitanhatu mushure mekufa kunorongedzwa mukukudza kwehama 'kukurangaridza kwakanaka kwevakafa. Iyi mhemberero haitenderwi, uye Bhaibheri kana Chechi haritauri chinhu pamusoro pavo. Ichi ndicho chikafu chokutanga chinorongwa mumhuri yehama.
Nzira yekupikesa mumwe munhu anoifarira?
Chii chisingabvumirwi muLent?
Rituals Ivan Kupala kuti awane mari
Nzira yekupikesa mukomana pasina migumisiro?
Migumisiro yekukuvara kwehukama
Kubviswa kweii kukanganisa usiku
Nyaya - magical properties
Rudo runotsvaga fodya
Sei iwe usingakwanisi kuita carol mugore rakapera?
Ungasunga sei arafatka pamusoro wake?
Vana Michel Mercier
Kufungidzira kushungurudzwa mumwana
Victoria Beckham akaratidza zvaanopa murume wake panguva dzebhizimisi rwendo
Musoro wepamusoro-shanduko yekudyisa
Glass table transformer
Ndeipi iri nani - Dominican Republic kana Cuba?
Ronga ne aquamarine
Mipfeko yakareba muvhu nekambani kfupi
Bunny slippers ane maoko avo
Simba Qi - manzwiro aunoita, kukura, kutarisira simba reQi?
Kuchengetedza uye kugadziriswa kwevhuvhu rakatsvuka
ChiSweden mhuri yemhuri yakabudisa mufananidzo wekutanga weChris Oskar
Kubudirira kwevanhu zvidimbu zvehutano hwepamusoro
Corner bench yekicheni
Dorosi ye-sodium chloride panguva yekuzvitakura